पुजा बढी झुटा बोल्ने काम बढी गर्ने मेयर यिनै हुन ! - Purbeli News
पुजा बढी झुटा बोल्ने काम बढी गर्ने मेयर यिनै हुन !
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ३०, २०७४ समय: ८:१८:०९
बिराटनगर । तिन घण्टा पुजा कसले गर्ला ? तपाँईलाई कसैले सोध्यो भने तपाँई संग कुनै जवाफ हुदैन । किनभने कुनैपनि मन्दिरको पुजारीलेपनि ३ घण्टा पुजा गर्दैनन । तर विराटनगरको बिषयमा कुरा गर्नुभयो भने,‘ महानगरका मेयर भिम पराजुली तिन घण्टा लगाएर घरमा पुजा पाठ गर्छन । ६ घण्टा सुत्छन । अर्थात प्रत्येक दिन बेलुका ११ बजे सुत्छन । विहान ५ बजे उठ्छन र ८ बजे सम्म पुजा पाठ गरेर नियामित काममा निस्किन्छन । अनि थाल्छन झुटो बोल्न ।
केहि महिना अघि एकजना युवा नेताले मेयर पराजुलीको बारेमा भनेका थिए , भिम पराजुली साफेद झुट मान्छे हो , उसको कुरा ९९ प्रतिशत हावा हुन्छ । पराजुली लाई त हुन्डरी संघको अध्यक्ष भन्दापनी फरक पर्दैन,। ति युवा नेताले भने , भिम पराजुली ३ घण्टा पुजा गर्छन, ६ घण्टा सुत्छन र १५ घण्टा झुट बोल्छन ।
हुनै नसक्ने पत्याउनै नसक्ने हावादारी गफ दिन्छन । मेयर जितेर हनिमुन समेत मनाई सकेका पराजुलीले एक सय दिन भित्र विराटनगरबासीलाई हिलो र धुलोबाट मुक्त गर्ने बताएका थिए । तर अहिले सम्म सिन्को सम्म भाँच्न सकेका छैनन । विराटनगरको रोडशेष चौकदेखि बरगाछी सम्मको धुलाम्य र हिलाम्य सडक नै महानगरका मेयर पराजुलीको महानगर बिकासलाई ब्यवस्थापन गर्ने परिचय हो । पराजुलीले नियम मिचेर कर्मचारी भटाभट नियुक्ती गरेर फेरी बिबादमा आएका छन ।
महानगरपालिकामा उनले भर्खरै एक जना खरदार नियुक्त गरेका छन । नेपालको कुनै पनी कानुनमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाईने छैन । पराजुलीले नियमबिपरीत कर्मचारी नियुक्ती गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोत भन्छ मोरङ क्षेत्र न ६ का प्रतिनिध सभाका उमेदवार डा.शेखर कोईरालालाई हराउन समेत उनको रोल महत्वपुर्ण थियो । डाक्टर साबलाई जिताउन भिमको भुमिका खै के भयो देखिनु पर्यो नी ? उनले प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन ।
हाेटलकाे काेठामा महिला र पुरुषको शव फेला, हत्या भएको आशंका
जिप दुर्घटनामा नौ घाइते
सेती नदीमा डुबेर युवक बेपत्ता
कटारीमा एक दर्जन बढी निजी स्वास्थ्य संस्था अवैध रुपमा संचालन
कोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता युवक मृत फेला
मजदूरी गर्दै आएका दुई युवकको डुबेर मृत्यु
कोरियामा लक्ष्मीमार्गका बाल कुमारको मृत्यु
नेपाली सेनाद्वारा धनकुटा कञ्चनजंघा कन्ट्रक्सनमा रहेकाे बम निष्कृय
ईटहरीमा घरभाडा आतंक, ब्यबसायी नै पलायन हुने खतरा
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ ०७ गते बिहीबार
रोनाल्डोको गोल : पोर्चुगल १-० ले अगाडि
कोशी ब्यारेजमा जेसिबी बोकेको ट्रक खस्यो, दुईको मृत्यु
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ आषाढ ०६ गते बुधबार